Akwụkwọ Ozi E Degaara Ndị Hibru 13:1-25
Okwu agbamume na ekele (1-25)
Unu echefula ịna-ele ndị ọzọ ọbịa (2)
Ka a kwanyere alụmdi na nwunye ùgwù (4)
Na-eruberenụ ndị na-eduzi unu isi (7, 17)
Na-achụrụ Chineke àjà otuto (15, 16)
13 Nọgidenụ na-ahụ ibe unu n’anya ka ụmụnne.+ 2 Unu echefula ịna-ele ndị ọzọ ọbịa*+ n’ihi na ọ bụ ile ọbịa mere ka ụfọdụ ndị lee ndị mmụọ ozi ọbịa n’amaghị na ha bụ ndị mmụọ ozi.+ 3 Na-echetanụ ndị nọ n’ụlọ mkpọrọ*+ ka à ga-asị na unu na ha nọ n’ụlọ mkpọrọ+ nakwa ndị a na-emegbu emegbu, ebe ọ bụ na unu na ha nọ n’otu ahụ́.* 4 Ka mmadụ niile na-akwanyere alụmdi na nwunye ùgwù, ka a gharakwa imerụ alụmdi na nwunye,+ n’ihi na Chineke ga-ekpe ndị na-akwa iko* ikpe, kpeekwa di ma ọ bụ nwunye na-akwa iko ikpe.+ 5 Ka otú unu si ebi ndụ gosi na unu ahụghị ego n’anya,+ kama ka ihe ndị dị ugbu a ju unu afọ.+ N’ihi na o kwuru, sị: “E nweghị ihe ga-eme ka m hapụ gị, e nweghịkwa ihe ga-eme ka m gbakụta gị azụ.”+ 6 Ka anyị wee nwee obi ike ma sị: “Jehova* bụ onye na-enyere m aka. Agaghị m atụ egwu. Gịnị ka mmadụ ga-emeli m?”+ 7 Na-echetanụ ndị na-eduzi unu,+ bụ́ ndị gwara unu okwu Chineke, nweekwanụ ụdị okwukwe ha nwere* mgbe unu na-ahụ uru omume ọma ha bara.+ 8 Jizọs Kraịst anaghị agbanwe agbanwe. Onye ọ bụ ụnyaahụ ka ọ ka bụ taa, ọ ga-abụkwa ya ruo mgbe ebighị ebi. 9 Unu ekwela ka e jiri ozizi dị iche iche si ebe ọzọ duhie unu, n’ihi na ọ ka mma ka ọ bụrụ amara Chineke ga-eme ka obi sie unu ike kama nri* ga-eme ka obi sie unu ike. Nri anaghị abara ndị ji ya kpọrọ oké ihe uru.+ 10 Anyị nwere ebe ịchụàjà nke ndị na-eje ozi dị nsọ n’ụlọikwuu na-enweghị ikike iri ihe dị na ya.+ 11 N’ihi na a na-akpọ ozu anụmanụ ọkụ n’azụ ebe a mara ụlọikwuu,+ nnukwu onye nchụàjà ejiri ọbara anụmanụ ndị ahụ chụọ àjà mmehie n’ebe nsọ. 12 Ọ bụkwa ya mere Jizọs ji taa ahụhụ n’azụ obodo*+ ka o wee jiri ọbara ya mee ka ndị mmadụ dị nsọ.+ 13 N’ihi ya, ka anyị gakwuru ya n’azụ ebe a mara ụlọikwuu ma die mkparị o diri,+ 14 n’ihi na anyị enweghị obodo nke na-adịgide adịgide n’ebe a, kama anyị na-echeresi nke na-abịa abịa ike.+ 15 Ka anyị si n’aka ya na-achụrụ Chineke àjà otuto mgbe niile,+ ya bụ, okwu ọnụ+ anyị nke na-akọsa aha Chineke n’ihu ọha.+ 16 Unu echefukwala ịna-eme ihe ọma na ịna-enye ndị ọzọ ihe+ n’ihi na ụdị àjà ndị a na-adị Chineke ezigbo mma.+ 17 Na-eruberenụ ndị na-eduzi unu isi,+ na-edokwanụ onwe unu n’okpuru ha,+ n’ihi na ha na-eche unu* nche ebe ọ bụ na ha ga-aza Chineke ajụjụ.+ Ime otú a ga-eme ka ha jiri ọṅụ na-arụ ọrụ a ma ghara ịna-ama ọsụ, n’ihi na ọ ga-emebiri unu ihe. 18 Na-ekperenụ anyị ekpere n’ihi na obi siri anyị ike na akọnuche anyị dị ọcha,* anyị chọkwara ịna-akwụwa aka ọtọ n’ihe niile.+ 19 Ma m na-agba unu ume karịchaa ka unu na-ekpe ekpere ka m bịakwute unu n’oge na-adịghị anya. 20 Ka Chineke nke udo, onye si n’ọnwụ kpọlite Onyenwe anyị Jizọs, bụ́ nnukwu onye ọzụzụ atụrụ+ nke wetaara Chineke ọbara ọgbụgba ndụ ebighị ebi, 21 nye unu ihe ọma niile ga-eme ka unu na-eme uche ya. Ka o si n’aka Jizọs Kraịst mee ka anyị na-eme ihe dị ya mma. Ka otuto dịrị ya ruo mgbe niile ebighị ebi. Amen. 22 Ụmụnna m, m na-agba unu ume ka unu wetuo obi gee ntị n’okwu agbamume a, n’ihi na m detaara unu akwụkwọ ozi dị nkenke. 23 Achọrọ m ka unu mara na a hapụla nwanna anyị Timoti. Ọ bụrụ na ọ bịa n’oge na-adịghị anya, mụ na ya ga-eso bịa hụ unu. 24 Keleerenụ m ndị niile na-eduzi unu nakwa ndị nsọ niile. Ndị nọ n’Ịtali+ na-ekele unu. 25 Ka Chineke meere unu niile amara.
^ Ma ọ bụ “ịna-emere ndị ọbịa ihe ọma.”
^ Na Grik, “ndị nọ n’agbụ; ndị e kere agbụ.”
^ O nwere ike ịbụ, “ka à ga-asị na unu na ha na-atakọ ahụhụ.”
^ Ma ọ bụ “na-eṅominụ okwukwe ha.”
^ Ya bụ, iwu gbasara nri.
^ Na Grik, “n’azụ ọnụ ụzọ ámá obodo.”
^ Na Grik, “dị mma.”